ကျောက်ထပြီး ကြွေတက်နေတယ် Khant Si Thu, Ei Chaw Po (Myanmar New Funny Movies 2016)p-2
Plz.. Subscribe to see more
This video (ကျောက်ထပြီး ကြွေတက်နေတယ် Khant Si Thu, Ei Chaw Po (Myanmar New Funny Movies 2016)p-2) has been derived to us from the YouTube Data API v3 using this link. The googleapis.com domain is owned by Google (the parent company of YouTube). Therefore, we do not have control or permission to remove or modify videos served from googleapis.com.
ဂျင်းဂျင်းနဲ့အေးအေး တွေ့ ပြီ...ခ်ခ် (Mingalar + Special Cut)
မင်္ဂလာရှိတဲ့ အရပ် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ မှ ကျေးလက်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ မြင်ကွင်းများ
(စက်တင်ဘာ ၃ ရက်နေ့တွင် စတင်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားပါတော့မည်။)
Produced by Myanmar Media 7
Sponsored by မာလာမြိုင် ကုမ္ပဏီ & Ve Ve
On Air - MNTV & Channel 9
Coming Soon ..... Sep 3, 2017
ကျောက်ထပြီး ကြွေတက်နေတယ် Khant Si Thu, Ei Chaw Po (Myanmar New Funny Movies 2016)p-1
MODA မဂ္ဂဇင်းကာဗာ ရိုက်ကွင်းမှ မစ်ကီစ် နှင့် အေးမြတ်သူ
ဂျာမန်လူမျိုး အဆိုတော် မစ်ကီစ် နှင့် သရုပ်ဆောင် အေးမြတ်သူ တို့ရဲ့ MODA Fashion Magazine အတွက် Cover Photo ရိုက်ကွင်း။
Mikis Weber and Aye Myat Thu posed for MODA Fashion Magazine Cover. #MikisWeber #AyeMyatThu #MODAMagazine
မြန်မာဇာတ်ကား-အချစ်ဆိုသည်မှာ-အောင်ရဲလင်း၊ ဖွေးဖွေး၊ မေသက်ခိုင်
* မဟာ ရုပ်သံ channel
မဟာ ရုပ်သံမှ ရပ်ဝေး ရပ်နီးရှိ ရွှေမြန်မာများအတွက်
မြန်မာဇာတ်ကားများကို နေ့စဉ် (၂၄) နာရီလုံးလုံး
- online channel 🌐 အင်တာနက်မှကြည့်ရသော 🌐 နှင့်
- offline channel 🎬 တီဗီဖြင့်ကြည့်နိုင်သော 🎬 စသဖြင့်
မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ဖုန်း (သို့) တက်ဘလက်မှာ
Mahar App-မဟာ အပလီကေးရှင်းကို
download နှင့် install လုပ်ပြီး မြန်မာဇာတ်ကားများစွာကို
FREE ခံစား ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
* Android ဖုန်းသုံးသူများ အပလီကေးရှင်း ဒေါင်းရန်
* iOS ပန်းသီးဖုန်းသုံးသူများ အပလီကေးရှင်း ဒေါင်းရန်
1) PSI S2AEC HD / KU BAND စလောင်း အနက် အသေး
2) IPM လိမ္မော်ရောင် စလောင်းအသေး နှင့်
3) INFOSAT စလောင်းဖမ်းစက်များဖြင့်
မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ လာအိုနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံများမှ
ဖမ်းယူ ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။
မကြာမီ အချိန်များအတွင်း အခြား ရုပ်သံဖမ်းစင်များတွင်
ဖမ်းယူ ရရှိနိုင်ရန် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
မင်္ဂလာရှိတဲ့အရပ် - ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ : Cast: Myint Myat, Aung Thu Lwin, Nay Dwe, Aye Thaung
Myint Myat, Aung Thu Lwin, Nay Dwe
Myanmar New Moive 2017
မင်္ဂလာပါ ချစ်သောပရိတ်သတ်ကြီးရေ ❤️❤️❤️
Media7မှ စီစဉ်တင်ဆက်ပြီး ဒါရိုက်တာ သြရသ ရိုက်တဲ့ #မင်္ဂလာရှိတဲ့အရပ် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို ( 3-9-2017 ) ရက်နေ့မှစတင်၍ MNTV ( Sunday - 7:00 pm ) နှင့် Channel9( Friday- 7:00 pm ) တို့တွင် အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်..။
မြင့်မြတ်၊ နေဒွေး၊ ကယ်လ်ဗင်ကိတ်၊ အေးဝတ်ရည်သောင်း၊ နွယ်ဒါလီထွန်း နှင့် သရုပ်ဆောင်များစွာ ပါဝင်တင်ဆက်ထားကြပါတယ်..။
အားပေးကြပါဦး မင်္ဂလာရှိသော ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးခင်ဗျား...။
“ခဏ ခဏ” ဇာတ်လမ်းတို ရိုက်ကွင်းမှ ဂန္ထ၀င် နှင့် သူထူးစံ
ဒါရိုက်တာ ပြေဇင် ရိုက်ကူးပြီး၊ သူထူးစံ နှင့် ဂန္တ၀င် တို့ အဓိကပါဝင် သရုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ “ခဏ ခဏ” ဇာတ်လမ်းတို ရိုက်ကွင်း။
Thu Htoo San and Gandawon star in "Kha Na Kha Na" short film by director Pyay Zin. #Gandawon #ThuHtooSan #MyanmarMovie
ote kyar myat paut, nae toe, nae min, htun htun, thet mon myint, zin wine,soe myat thu zar
Myanmar Movies TRAILERS
Ei Chaw Po Interview
Myanmar Ei Chaw Po
MYANMAR FUNNY NEW MOVIES 2017
ဗီလိန်၊ လူကြမ်းကြီးဘဲ လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ရွှေထူး
"ရုပ်ရှင် Character (သရုပ်ဆောင်) လုပ်ရင် ကျနော်က ဘယ်တော့မှ မင်းသား၊ လူကောင်း မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ ဗီလိန်၊ လူကြမ်း နေရာကဘဲ သရုပ်ဆောင် ချင်ပါတယ်" လို့ ပြောလာတဲ့ အဆိုတော် ရွှေထူး နှင့် ခဏတာ။
Myanmar Celebrity Update: Shwe Htoo likesabad guy character in movie #ShweHtoo #MyanmarSinger
Myanmar Funny movies clip 1
Myanmar funny movies clips
အချစ်ရေးက အရမ်းပော်ျဖို့ ကောင်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့ အမွန်း
"အချစ်ရေးက အဆိုး အနေနဲ့ ဘာမှကို ပြောစကားမရှိအောင် ကောင်းနေလို့ အရမ်းကို ပျော်နေပါတယ်" လို့ ပြောလာတဲ့ အဆိုတော် အမွန်း ရဲ့ Relationship အကြောင်း ခဏတာ။
Myanmar Celebrity Update: Well-known Singer, Ah Moon's Relationship #AhMoon #MyanmarSinger
ဓားသွားထက်ကပျားရည်စက် - Ei Chaw Po
Win Myat Hpone
0012 Part 1 - Lu Min, Yu Thandar Tin
Aung Ye Linn & Shwe Hmone Yati Star In "Nge Kyun" Movie
This is an exclusive video of "Nge Kyun" movie making by Director Win Tun Tun at Pearl Condo in Yangon on March 30, 2016. Aung Ye Linn, Lu Min, Soe Myat Thuzar, Shwe Hmone Yati and Su Myat Noe Oo are starring in this movie together with other supporting actors.
မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ပုလဲကွန်ဒိုမှာ ရိုက်ကူးနေတဲ့ ဒါရိုက်တာ ၀င်းထွန်းထွန်း ရဲ့ "ငယ်ကျွန်" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကွင်းပါ။ "ငယ်ကျွန်" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် လူမင်း၊ အောင်ရဲလင်း၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ ရွှေမှုံရတီ၊ ဆုမြတ်နိုးဦး နှင့် အခြား ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံများစွာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားကြပါတယ်။